'La Casa de Papel 5' - Guusha Netflix oo soo afjarta | Bezzia
'La Casa de Papel 5': Guusha Netflix
Susana godoy | 07/09/2021 14:00 | Wararka
Qaybta cusub ee 'Guriga Paper 5'. Xilli cusub oo laba loo qaybiyay. Tani waa mid aad u soo noqnoqota marka taxanaha uu gaarayo natiijada ugu dambeysa maadaama ay u muuqato inay sidaas tahay. Laakiin isla waqtigaas, Netflix waxay mar kale noqotay madal doorasho iyada oo ay ugu wacan tahay guusha taxanaha sidan oo kale ah.
In kasta oo sidaan si fiican u naqaanno, uusan ku dhalan laakiin aan ku aragnay markii ugu horreysay Antena 3. Laakiin waa run in boodka madalku uu ka dhigay malaayiin qof inay awoodaan inay tijaabiyaan oo sidaas ku noqdaan ifafaale gudaha iyo dibaddaba taas oo runtii ah. Miyaad hore u aragtay cutubyada 5 ee ugu horreeya?
1 'La Casa de Papel 5' oo loo qaybiyay laba qaybood
2 Xilliga cusub ee La Casa de Papel
3 Ma jiri doontaa mustaqbal La Casa de Papel?
'La Casa de Papel 5' oo loo qaybiyay laba qaybood
Safarku wuxuu ahaa mid dheer, oo ay ka qaybgaleen tiro badan iyo sagootin qadhaadh oo marmar ah, sidii ay mar walba ahaayeen. Laakiin waxaan gaarnay xilli ciyaareedkii shanaad ee taxane u muuqday inay leeyihiin hal kaliya. Sidii aan soo sheegnay, halyeeyaasheeda oo ku labisnaa dhar -gaduudka cas iyo maaskaro Dalí ayaa noqday jilayaasha waaweyn ee gudaha iyo dibedda dalkeenna. Laakiin waa run in sheeko kasta oo wanaagsan sidoo kale waa inay soo afjarto sidaan si fiican u naqaan. In kasta oo ay na xanuujinayso, haddana waa run in ay mudan yihiin dhammaad qaab. Sidaa awgeed 3 -da Sebtember, 5 -tii qaybood ee ugu horreysay xilli -ciyaareedkii 5 -aad ayaa la siidaayay halka 5 -ta kalena ay imaan doonaan Netflix 3 -da Diseembar. Haa, sannadkan taxanaha ayaa la dhammayn doonaa.
Xilliga cusub ee La Casa de Papel
Annagu ma samayn doonno qaswadayaal maxaa yeelay markaa annagu mar horeba waannu garannay waxa dhaca, markaa waxaan dhihi doonnaa oo keliya ka dib dhacdadii ugu dambeysay ee xilli -ciyaareedkii afraad, waxaan u baahnay kii shanaad sida ugu dhakhsaha badan. Waa run in wakhtigaas ay jireen aragtiyo badan oo ku saabsanaa in kan afraad uu noqon doono dhammaadka. Laakiin Taas oo ku reebaysa xayndaabyo badan hawada ayaa laga yaabaa inay na siisay tilmaanta ah in shanaad soo socoto oo yimid.
Laakiin waxay ku timaadaa laba gool waxayna u muuqataa in Álex Pina ay doonaysay inay ku biiriso wax ka sii badan oo aanay dhagaystayaashu filayn. Sababtoo ah inkasta oo ay u qaybsan tahay laba dufcadood, haddana waa run in goobihii aan weli la xallin ku dhawaad ​​lagu samayn doono qaybta hore. Intaa waxaa dheer, marka 10 cutub markiiba la sii daayo, dadwaynuhu waxay hore u yaqaanaan ama u cad yihiin halka aan la garanayn waxa laga bilaabi doono in lagu xalliyo. Waxaa la xusay in qaybta labaad ee 'La Casa de Papel 5' waxay si aad ah u khuseysaa diyaaradda shucuureed ee dabeecad kasta sidaasna waxaa si toos ah loogu xiriirin karaa sagootinta.
Ma jiri doontaa mustaqbal La Casa de Papel?
Waqtigan xaadirka ah, dhammaan taageerayaashaas oo aan rabin taxanaha inay dhammaadaan, waxay bilaabaan inay tixgeliyaan xulashooyin cusub. Waxaa jiray hadal ah in laga yaabo in dabeecaddu ay la wareegi doonto oo ay jiri karto taxane cusub oo ku saleysan ama laga yaabee, sanado kadib, ku noqo barta bilowga sida ku dhacday cinwaano kale oo badan oo aan hore u naqaannay. Wakhtigan, waa inaan dejinaa 10 qaybood, kuwaas oo sida aan nidhaahno u qaybsan laba qaybood.
Xilligaan wuxuu lahaa duubis ka sii murugsan, oo ay ugu wacan tahay qalalaasaha ka dhashay Coronavirus iyo sidoo kale, maxaa yeelay cutub kastaa wuxuu leeyahay hal saac, taasoo la micno ah in wax yar la kordhiyay. Waxaa ka mid ah dhacdooyinkiisa waxaan leenahay Danmark, sidoo kale Spain iyo waliba Portugal. Tani waa mid ka mid ah xilliyada ugu xiisaha badan dhinac walba. Sababtoo ah waxay ku saabsan tahay gelinta kooxda iyo xitaa Professor -ku ku dhawaad, ku dhawaad ​​xadka. Waxa intaa dheer in sharadka lagu garto jilayaal cusub iyo xidhitaan ujeeddadiisu tahay in la dhammaystiro. Way hubaan!
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Wararka » 'La Casa de Papel 5': Guusha Netflix
Sida loo helo murqo laakiin aan loo baahnayn miisaan
Farqiga u dhexeeya taariikhda dhicitaanka iyo taariikhda ka horreysa